Galmudug oo war-saxaafadeed deg deg ah kasoo saartay dagaalka ka soconaaya Gaalkacyo (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Galmudug oo war-saxaafadeed deg deg ah kasoo saartay dagaalka ka soconaaya Gaalkacyo (AKHRISO)
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxaa si kulul looga hadlay dagaalka haatan ka soconaaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kaas oo u dhaxeeya ciidamada Galmudug iyo kuwa Puntland.
Waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in Puntland ay jabisay heshiiska lagu kala saxiixday magaalada Abuu Dhabi ee dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta, islamarkaana dagaalka maanta kasoo cusboonaaday magaalada Gaalkacyo ay iyaga soo qaadeen.
Waxay Galmudug sheegeen in ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay duulaan qaawan kusoo qaadeen dhinaca ay ku sugan yihiin ciidanka Galmudug, xilli ay isku diyaarinayeen hirgelinta heshiiskii lagu kala saxiixday dalka Imaaraatka Carabta.
Ilaa iyo haatan ma muuqato dhaqan-galka heshiiskii ay magaalada Abuu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta ku kala saxiixdeen madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Puntland, kaas oo u muuqda mid fashilmay.
Si kastaba oo ay ahaataba, magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa wehel u noqotay dagaal iyo colaado aan dhamaad lahayn, waxayna magaaladaasi u kala qeybsan tahay Koonfur iyo Waqooyi, waxaana kala maamula Galmudug iyo Puntland.